Nagu saabsan - Hebei Delin Makiinado Co., Ltd.
DH (R) Mashiinka Dufanka Taxanaha ah
DM (R) Semi saaris Taxanaha
DF (DHF) Taxanaha Xaragada Xaragada
DV (R) Sump Sump slurry saar
DG Taxanaha Jumlada Maska
DG Taxanaha saar
DSC (R) Taxanaha FGD
Bixi Xalka Ugu Fiican
30 Sano oo Khibrad u Leh Cilmi Baadhista, Naqshadeynta, Soosaarka & Iibinta-Kadib Adeeg Si Loo Helo Wadarta Xalka.
Hebei Delin Makiinado Co., Ltd. waa mid ka mid ah shirkadaha bamka ugu waaweyn ee ku takhasusay soo saarida bambooyin qulqulaya ee Shiinaha. Waxay ka kooban tahay aag ka badan 40,000m2 oo dhul ah iyo in ka badan 22,000 m2 oo dhisme ah. Wax soo saarka waxaa inta badan loo isticmaalaa macdanta, metallurgical, qorshaynta magaalada, awood, dhuxul, koorsada webiga, FGD, batroolka, kiimikada, wax dhismaha, iwm ka sokow suuqa gudaha, waxyaabaha our waxaa si fiican u iibin in ka badan 50 dal iyo gobollada.
Kooxda Farsamada Xoog leh
Waxaan leenahay koox farsamo oo xoog leh warshadaha, tobanaan sano oo khibrad xirfadeed ah, heer naqshadeyn heer sare ah, abuurista tayo-sare tayo sare leh oo wax soo saar leh.
Shirkadda fulisaa 'Total Tayada Control' si adag oo la ansixiyay ISO9001, ISO14001 iyo ISO / T18001 Shahaadooyinka.
Shirkaddu waxay u hoggaansameysaa caqiidada 'Kooxda Akhlaaqda, Waxsoosaarka Wanaagsan, Adeegga Sumadda' iyo mabda 'Tayada Koowaad, Macaamiil Sare' si ay u siiso Macaamiisha alaab aad u wanaagsan iyo adeeg ku qanacsan.
Sanado Khibrad Leh
Shirkaddu waxay adeegsataa softiweer kaaliyaha kumbuyuutarka softiweer ah oo casri ah si ay u qaabeyso alaabada iyo teknolojiyadda, taas oo ka dhigaysa habkayaga iyo heerka naqshadeynta inay gaarto heer caalami oo heer sare ah. Shirkaddu waxay leedahay saldhigga heerka koowaad ee baaritaanka waxqabadka mashiinka adduunka, awooddeeda tijaabadeedna waxay gaari kartaa 13000m³ / h. Wax soo saarka sanadlaha ah ee alaabteennu waa 10000 nooc ama tan oo lagu daadiyo dahaarka daawaha chrome sare. Wax soo saarka ugu muhiimsan waa Nooca DH (R), DM (R), DV (R), DF (DHF), DG, DSC (R), iwm. Cabbirka: 25-1200mm, Awoodda: 5-30000m3 / h, Madaxa: 5-120m. Shirkaddu waxay soo saari kartaa qalab kala duwan oo ay ka mid yihiin High Iron Chromium White, Super High Chromium Hypereutectic White Iron, Carbon Low High Chromium Alloy, Carbon Steel, steel ahama, Duplex Stainless steel, Ductile Iron, Gray Iron, iwm Waxaan sidoo kale bixin karnaa caag dabiici ah, qaybo caag ah elastomer iyo bambooyin.
Qaybta tiknoolajiyada aasaasiga ah wax yar ayey ka dambeeysaa, kororka warshadaha bamka waddankeyga wax badan ayaa harsan